Lọ sara mbara na Playa de San Juan!
HomeUlo dị obosara na Playa De San Juan!
Forlọ maka ire ere dị ezigbo mma yana ọ dị na Playa de San Juan, Guia de Isora, Tenerife.
A na-akwadebe ya nke ọma, ya na ihe ọ bụla dị mma ma dịka ọhụụ.
O nwere ime ụlọ atọ nke nwere akwa akwa akwa, ime ụlọ ịwụ abụọ, ebe obibi, ebe nchekwa na ebe mpasa ụgbọ ala!
Na nso osimiri, ụlọ nri na ọdụ ụgbọ mmiri!
Obodo nwere ụdị ọrụ dị iche iche, ụlọ akwụkwọ, ebe a na-ahụ maka ahụike, ụlọ ọgwụ ezé, ụlọ ahịa ọgwụ, anya, ọla, ụlọ ọfịs, ụlọ ahịa ebe a na-ere anụ, azụma, azụmonger, “5 oceanos” na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ezigbo ụlọ dị nso na Playa De San Juan!
Enolọ ndozigharị na Playa De San Juan!